कक्षामै कापीकिताब, ल्यापटप छोडेर फर्किने गरी निस्केका अजय २ हप्तासम्म किन फर्केनन् ? « Nepal Break
कक्षामै कापीकिताब, ल्यापटप छोडेर फर्किने गरी निस्केका अजय २ हप्तासम्म किन फर्केनन् ?
काठमाडौं । अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरबाट जनवरी १९ का दिनदेखि हराइरहेका नेपाली विद्यार्थी अजय साह अझै भेटिएका छैनन् । २२ वर्षका साह ड्रिउ विश्वविद्यालयको कलेज अफ लिबरल आर्टसका जुनियर तथा आवासीय सहायक हुन् ।
मोरिस काउन्टी प्रोसिक्युटरको कार्यालयका अनुसार साह न्यूयोर्क गइरहन्थे र उनको टेक्साससँग पनि नजिकको सम्बन्ध थियो । ‘अजय हाम्रो समूदायका चिरपरिचित र महत्वपूर्ण सदस्य हुन् र हामीले उनको खोजीका लागि प्रयास गरिरहेका छौं र उनी ड्रिउमा सुरक्षित फर्किन्छन् भन्ने आशा गरेका छौं’ अजय बेपत्ता भएपछि कलेजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।